Tokobetelo sy vahoakan’i Toliara Tokony hametra-pialana koa i Rivo Rakotovao
Fananganana ny “Fanjakana gasy” Nosamborina ny mpitarika
omaly alahady 14 oktobra 2018 ny faha-60 taonan’ny repoblika voalohan’i Madagasikara. Marolafy ny fomba nanamarihana izany saingy tsy vanona kosa ny fikasan-dry zareo mpanao politika nikasa hanangana fanjakana vaovao tetsy amin’ny Pave Antaninarenina.
Alain Mahavimbina “Tsy mpitsara intsony ny HCC fa lasa mpanapaka”
Maro ny fangatahana sy fitoriana mipetraka eo anivon`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana. Anisan`izany ny fangatahana nataon`ny kandidà 22 mba hamoahana ny lisi-pifidianana satria feno hosoka ny fanomanana azy.
Leader Fanilo elatra Jean Max Hitrikitrihin’ny elatra Zafera
Na tapa-bolana aza sisa ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana ho filoham-pirenena dia tsy sasatry ny manamafy ry zareo avy eo anivon’ny antoko politika Leader Fanilo,
Kandida mankato fifidianana Manomboka mampiaka-peo koa !
Efa nilaza ny heviny ny kandida ho filoham-pirenena, Paul Rabary, nialoha ny fiatombohan’ny fampielezan-kevitra fa tokony hanapa-kevitra ireo kandida mitaky ny hanemorana fifidianana na hanao izy na tsy hanao.
Tsy fandehanana mifidy Mety hiteraka fahavoazana…
Amin`izao ankatoky ny fifidianana izao, tsara ny manamarika fa zo sy adidy ny mifidy. Amin`ny maha zo azy, ny olona voasazy ihany no tsy mahazo mifidy na olona izay heverina fa tsy manana fahefana ara-tsaina hanao an`izay.
Zanak’i Dada Izany ka tia tanindrazana !
Rakotra vahoaka resy lahatra sy baikon’ny fitiavan-tanindrazana any amin’izay toerana alehan’ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana. Tsy misy artista malaza ary tsy misy fizaran-javatra sy vola toy ny fanaon’ny sasany, fa baikon’ny finiavana sy ny fitiavana.
Ampanjaka Ankarana sy Ravalomanana Mitovy ny fomba fijery
Noraisin'ny Ampanjaka Ankarana tao an-tranony i Marc Ravalomanana ny sabotsy 13 oktobra lasa teo. Any amin’iny faritra Avaratry ny Nosy iny no misy an’Ankarana, anisan’ny manana ny maha izy azy eto amin’ny Nosy noho ny harena na ara-boajanahary na ara-kolontsaina ananany.
Tonga eto Iarivo indray Atoa Rasamizafy Simon nitondra hafatra manokana avy amin’ny Tokobetelo sy ny vahoakan’i Toliara nampitainy tamin’Atoa Sazalahy Tsianihy solontenan’ny mpitolona avy any amin’ny Faritanin’i Toliara manotrona tsy tapaka ny tolona tarihan’ny depioten’ny fanovana etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey hatreto.
Ny hafatra nalefan’ny Tokobetelo sy ny vahoakan’i Toliara ary, araka ny tatitra nentin-dRasamizafy Simon dia ny hoe : “Tsy eken-dry zareo ny hanaovana fifidianana amboletra sy lalàm-pifidianana Tian-kano tsy tian-kano toy ny nandrafetan’ny mpitondra HVM amoron-tevana ny “code electorale” nambolena krizy sy namonona olona tamin’ny 21 aprily 2018. Nanambara ny filohan’ny senat, Rivo Rakotovao, fa tsy maintsy hatao amin’ity 2018 ity ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Malagasy manaraka. Aoka hametra-pialana Rajao sy ny forongony, hoy ny Tokobetelo sy ny vahoakan’ny Faritanin’i Toliara ary tokony hametra-pialana koa ny tenanao Atoa Rivo Rakotovao vao izay no ho tanteraka ny “tsy maintsy” voalazanao. Raha tena vonona ianareo HVM dia lalana mahitsy sy malaky hahatongavana amin’ny “tsy maintsy” io fialan-dRajao io. Niezaka ny Ceni nanome fe-potoana hatramin’ny 31 mey 2018 ny mpitondra amoron-tevana tarihan-dRajao raha tiana hisy ny fifidianana amin’ity 2018 ity. Ny mpanao politika, ny olobe, ny herivelona rehetra tena mangetaheta ny hisian’ny fifidianana amin’ity 2018 ity fa ianareo HVM no fototry ny olana, manao ny tsy fanao fa mamorona “code electorale” tsy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana. Efa maika hanala anareo amin’ny alalan’ny fifidianana ny vahoaka fa ianareo mihitsy no tsy te hanao fifidianana amin’ity taona ity fa mihatsaravelatsihy fotsiny amin’ny fiteny arodarodao na valamaty. Fa misaotra ny HCC ihany aloha nanafoana ny “articles” maromaro tsy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenena . Misy lamina sy fandaminana tsy maintsy ataon’ny olon-kendry sy manam-panahy ary ny olobe ahafahana manatanteraka ny fifidianana. Tsy azo ekena fa mamoafady ny manao amboletra mamoaka didy fampiharana ny “code electorale” izay tsy mbola nandalo imason’ny solombavambahoaka ny fomba hanetsehana azy. Fa ny maika indrindra dia ny fialan-dRajao sy ny forongony fa mpanao kolikoly maty an-tane”.